30 Cowboy Bebop Xigasho Si Ay kuugu Soo Celiso 90-meeyadii - Kale
30 ee xigashooyinka ugu waawayn ee laga soo xigtay Cowboy Bebop oo kugu soo celin doona 90s
Ilaha muuqaalka leh: Warqada UP
Cowboy Bebop waa anime la dhigay sannadka 2071, taas oo ah wax lagu qoslo maxaa yeelay dugsigan hore ee caadiga ahaa waqtigeeda ka hor.
Mawduucyada gaarka ah ee mawduucyada iyo mawduucyada gaarka ahi waxay kaa dhigi doonaan inaad ka fikirto heer qoto dheer, oo maskaxdaada u furto aragtiyo cusub oo aan anime kale oo waqtigeedii ka mid ah ahayn.
Waa kuwan qaar ka mid ah xigashooyinka ugu fiican Cowboy Bebop waa inuu bixiyaa.
Xigashooyinka ugu xusuusta badan ee Cowboy Bebop:
'Waxaad ii sheegtay hal jeer inaan iska iloobo wixii tagay, sababtuna macno malahan, laakiin waxaad tahay kan wali kuxiran waxyaabihii lasoo dhaafay, Spike.' - Faye Valentine
“Meel dheer ku dhegi maayo - way i dili doontaa. Qoyskayga oo dhami waa sidaas oo kale. ” - Faye Valentine
“Ma ogtahay qaanuunka koowaad ee dagaalka? iyaga toogasho ka hor intaysan ku toogan. ” - Faye Valentine
“Wixii la soo dhaafay waa la soo dhaafay, mustaqbalkuna waa mustaqbalka. Ninku waa nin naagtuna waa naag. Waqtiga xaadirka ah waa xaadirka. Anigu waxaan ahay aniga iyo idinkuna waxaad tahay ciddaad tahay. Intaas uun baa ku jirta. Runtii muhiim ma tahay? Mise waxaan u maleyneynaa inay sidaas tahay? - Faye Valentine
“Badbaadada kuwa ugu fiican waa sharciga dabiiciga. Waan khiyaaneynaa ama waa nala khiyaaneeyey. Sidaas awgeed, waannu ku barwaaqoobi doonnaa ama u baaba'aynaa. Wax wanaagsan weligay iguma dhicin markaan aaminay dadka kale. Taasi waa casharka. ” - Faye Valentine
“Waxay badanaa sheegaan in aadanuhu kaligiis noolaan karin. Laakiin waad ku noolaan kartaa quruxsan keligaa. Halkii aad keli ku dareemi lahayd koox, waxaa wanaagsan inaad kali ku ahaato kalinimadaada. ' - Faye Valentine
# 2 - Xigashooyinka London
“Nafta Eebbe ina siiyay, ruuxeenna. Ruuxeena, oo helay wado lagu dabbaasho shabakada weyn isla markaana lagu noolaado boos la'aanta. Jirka aadamigu miyaanu ahayn qolof uun? Nooc jiritaan oo aad u yar oo daciif u ah miyir qabka baaxadda weyn iyo kartida leh. ” - Londes
# 3 - Xigashooyinka Vincent Volaju
“Kama baqayo dhimasho. Waxay kaliya ka dhigan tahay riyo aamusnaan. Riyo daa’im ah. ” - Vincent Volaju
Maalmihii aan noolahay, kuwa aan kula soo qaatay oo keliya ayaa run u muuqday. ” - Vincent Volaju
“Qofna ma sawiri karo xariiq cad oo u dhexeeya caqliga iyo caqliga. Waxaad u dhaqaajineysaa khadkaas sida aad u aragto inay habboon tahay naftaada. Qof kale ma awoodo. Waad fahmi doontaa dhawaan… kan waalan waa adduunkan. - Vincent Volaju
Wax badan ma ka ogahay purgatory? Waa meesha udhaxeysa jannada iyo cadaabta, halkaas oo kuwa laga tagay, oo aan awoodin inay galaan jannada ay kusii xanuunsadaan, goob halgan iyo xanuun. Si kale haddii loo dhigo, adduunka aan hadda ku jirno. ” - Vincent Volaju
# 4 - Diyaarado Jet Madow
“Waa sidii Charlie uu ku sheegay riyadayda. Haddii aad rabto inaad hesho waa inaad siisaa. Eeg Spike, waa inaad dhageysataa riyadaada, taasi waa sidaad ku heli karto gabadhaada riyadaada. ' - Diyaarad Madaw
Aadanaha waxaa loogu talagalay inay ku shaqeeyaan oo u dhidid lacagtooda ka dib. Kuwa isku daya in ay dhaqso u taajiraan ama ay ku noolaadaan kharashka kuwa kale - dhammaantood waxay helayaan ciqaab rabaani ah inta ay socoto. Taasi waa casharka. Laakiin, hal shay oo ku saabsan aadanaha waa inay si dhakhso leh u illaawaan casharkii ay barteen. ” - Diyaarad Madaw
Ragga had iyo jeer waxay umuuqdaan inay kafekeraan wixii soo maray kahor intaysan dhiman, sidii iyagoo waalan oo raadinaya cadeyn ah inay runti noolaayeen. ” - Diyaarad Madaw
“Marwalba waad ila joogtay aniga, waana intaas wixii aan u baahnaa. Adiga kaliya Sababta qaar awgood, ma aanan dareemin murugo ama kala jabin, waxay umuuqatay mid dhab ah. Laakiin si tartiib ah ayaan u gartay inay run tahay - inaad maqnayd. Si tartiib tartiib ah, waxaan u dareemay tartiib tartiib ah wax gudahayga ku jira oo suuxsan - Diyaarad Madaw
“Wax walba waxay leeyihiin bilow iyo dhamaad. Noloshu waa uun meerto bilow iyo joogsiba. Waxaa jira dhammaadyo aanan dooneynin, laakiin waa lama huraan. Waa inaan wajahnaa iyaga. Waa waxa aadanaha ay tahay waxa ku saabsan. ' - Diyaarad Madaw
“Markii ugu horeysay ee aan kulanno aniga iyo adiga, wax baad ii sheegtay. Waxaad tiri mar baad dhimatay, geeri waad aragtay. Maxaad kaliya u sii deyn kari weyday? Iska ilow wixii tagay. ” - Diyaarad Madaw
# 5 - xigashooyinka Spike Spiegel
“Fiiri indhahayga, Faye. Midkood waa been abuur maxaa yeelay waxaan ku waayey shil. Tan iyo waagaas, waxaan ku arkayay waagii hore isha hal iyo tan kale. Marka, waxaan u maleynayay inaan arki karo kaliya xaqiiqooyinka dhabta ah, marnaba sawirka oo dhan. Waxaan dareemay sidii inaan daawanayay riyo aanan ka kicin karin. Intii aanan ogayn ayay riyadii dhammaatay. ” - Spike Spiegel
“Waan yaraa markaa, waxbana kama baqi jirin, kama aanan fikirin inaan ilbiriqsi dhinto. Waxaan moodayay inaanan laga adkaan karin. Kadib waxaan la kulmay gabar. Waxaan rabay inaan noolaado, waxaan bilaabay inaan sidaa u fikiro; markii iigu horaysay waxaan ka baqay geeri. Waligey sidan oo kale ma dareemin. ” - Spike Spiegel
bandhigyada anime ee ugu fiican waqtiga oo dhan
'Malaa'ig dhacday oo samada laga eryay, ayaa u soo baxday iftiinka in lagu helo naxariista Ilaah.' - Cowboy Bebop
'Waxaan jeclahay nooca dumarka haraati dameerka iga saari kara.' - Spike Spiegel
“Mar uun baa jirtay bisad shabeel xarig ah. Bisadan, waxay dhimatay hal milyan oo dhimasho, way soo noolaatay waxayna noolayd hal milyan oo nolol. Oo isagu wuxuu lahaa milkiileyaal kala duwan oo aanu runtii isagu dan ka lahayn, bisaddu kama baqayn inay dhimato. Kadibna maalin maalmaha ka mid ah, wuxuu la kulmay bisad cad oo dhedig ah, labadoodaba jacayl baa dhacay oo farxad ku wada noolaaday. Waa hagaag, sannadihii waa la soo dhaafay oo bisadda dheddigga cad ayaa gabowday oo dhimatay. Bisadda Tiger Striped ayaa ooyday hal milyan oo jeer, ka dibna isaguna wuu dhintay. Laakiin markan ... ma uusan soo laaban. ' - Spike Spiegel
bandhigyada anime sare waqtiga oo dhan
“Waxaa jira seddex waxyaalood oo aan aad u necbahay: Caruurta, xayawaanka rabaayadda ah, iyo dumarka dabeecadda leh. Markaa ii sheeg, maxaan dhammaantood ugu wada xirinnay markabkeenna? - Spike Spiegel
'Miyaadan rabin inaad la baashaasho oo aad noloshaada ku lumiso?' - Spike Spiegel
“Halkaas uma socdo inaan dhinto. Waxaan u tagayaa halkaas si aan u ogaado haddii aan runtii noolahay. ” - Spike Spiegel
# 6 - xigashooyin dibi qosol ah
Ha ka baqin Geerida. Dhimashadu had iyo jeer waa dhinaceena. Markaan muujino cabsi, waxay nooga booddaa si ka dhakhso badan iftiinka. Laakiin, haddii aynaan muujin cabsi, waxay si indho noogu fiirinaysaa dabeed na waxay nagu hoggaaminaysaa wax aan dhammaad lahayn. ” - Dibi Qosol ah
# 7 - Xigasho Xun
'Malaa'igta cirka laga eryay ma lahan wax aan ka ahayn inay noqdaan shayaadiin.' - Xun
'Ma jiraan wax haray oo lagu aamino.' - Xun
# 8 - Andy oo ka yimid xigashooyinka De Oniyate
'Maxay tahay sababta aan ugu cabbi doonin aniga iyo milicsiga indhahaaga qurxoon?' - Andy Von De Oniyate
# 9 - Xigashooyinka Gren
'Waxaad tiri uma baahnid asxaab, laakiin waxaan ku xirnahay erayga… illaa iyo ilmada.' - Gren
Ma haysaa wax talo bixin ah oo ku saabsan xigasho soo socota? La wadaag faallooyinka
25 xigashooyin Animeed shucuur ah oo ku saabsan Jacaylka iyo Xiriirka
Sidee Anime si xagjir ah ugu soo ifbaxay 57 Sano ee la soo dhaafay
jeex ugu fiican nolosha filimada anime